Uhlu lwe-imeyili Yomenzeli Wezakhiwo | Indawo yokugcina yedatha | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwe-imeyili Yomenzeli Wezakhiwo
Ikheli le-imeyili Yomenzeli Wezindlu
Uhlu lwe-imeyili ye-ejenti yempahla ethengiswayo ifaka yonke imininingwane yokuxhumana nabenzeli nayo yonke imininingwane yokuxhumana isesikhathini futhi iqinisekisiwe. Wonke ama-ejenti aholayo angenele ukungena kabili futhi ahlanzekile. Zonke izinkomba zomenzeli ziqinisekiswa ngeso lomuntu nangekhompyutha. Uma ucabanga ukufinyelela umuntu obamba i-real estate ejenti kufanele usebenzise le database.
Lolu hlu lwamakheli luzokusiza ukukhuphula ibhizinisi lakho kuma-ejenti ase-USA. Lolu hlu lwamakheli lubandakanya yonke imininingwane yokuxhumana yomuntu wase-USA state Realtor Database. Kulolu hlu, uzothola imininingwane yaseCalifornia, New York, Florida, Washington, Texas njll. Futhi uma ucabanga ukuthenga noma yiluphi olunye uhla lwama-ejenti weRealtor ake usisize sizokusiza ukuthi sakhele lolo hlu. Ungathola ikhasimende elilungile elibhekiswe ebhizinisini lakho lezindlu. Ukuthenga manje namuhla i-database yethu bese uqala umkhankaso wokumaketha. Le database isebenzisa ipulatifomu ye-CRM noma enye isoftware yokuthengisa ye-imeyili.
Uhlu lwamakheli we-Realtor Database lufaka ikheli le-imeyili le-realtor, inombolo yocingo njll. Imininingwane yokuxhumana. Bheka imininingwane engezansi yohlu lwethu lomthengisi wezezakhiwo.
Thenga Uhlu lwe-imeyili Lomenzeli Okusha nolwamuva kakhulu
Inani lamarekhodi: Isigidi se-1.2
* Igama lokuxhumana * Ikheli * Idolobha * Isifundazwe * Ikhodi ye-Zip * Inombolo yocingo
* Inombolo yefeksi * Ikheli le-imeyili lomenzeli * iwebhusayithi * Igama leNkampani
Izindleko eziphelele: $ 1,800
Inani lohlu: 100k
Uhlu lwe-imeyili Yomenzeli Wezindlu Zokuhlala Umbuzo Umbuzo Nezimpendulo